Momba anay - Beijing SINOVO International Trade Co., Ltd.
Tany am-piandohan'ny taona 1990 dia efa nanompo teo amin'ny sehatry ny milina fanamboarana ireo mpikamban'ny orinasa. Taorian'ny fandrosoana sy fanavaozana maherin'ny 20 taona, nanangana fiaraha-miasa maharitra amin'ny paikady maharitra miaraka amin'ireo mpanamboatra fitaovana ambony eto amin'izao tontolo izao sy orinasa mpamokatra fitaovana malaza eto Shina ny orinasa ary nahazo loka maro tamin'ny tetikasan'ny injenieran'ny injeniera sy ny tetikasa fanondranana fitaovana ho an'ny taona maro.
Ny sehatry ny orinasa SINOVO dia miompana indrindra amin'ny milina fananganana antontam-bato, fananganana, fantsakana fantsakana rano ary fitaovam-pitadiavana ara-jeolojika, fivarotana sy fanondranana ireo milina sy fitaovana fananganana, ary koa ny vahaolana amin'ny milina sy fitaovana. Izy io dia nametraka fifandraisana ara-barotra amin'ireo firenena sy faritra maherin'ny 120 manerantany, mamorona varotra, tamba-jotra serivisy ary modely marketing isan-karazany amin'ny kaontinanta dimy.
Ny vokatra rehetra dia nahazo ISO9001: 2015 fanamarinana, fanamarinana CE ary fanamarinana GOST.Anisan'ireny, ny varotra milina fanangonam-bokatra no marika voalohany any Shina amin'ny tsenan'i Azia atsimo atsinanana, ary lasa mpamatsy sinoa tsara indrindra ny indostrian'ny fitrandrahana afrikanina. Ary any Singapour, Dubai, serivisy famolavolana Algiers, hanomezana haitao manerantany sy kojakoja faran'izay manome tolotra aorinan'ny varotra aorinan'ny varotra.
Tany am-piandohan'ny taona 1990 dia efa nanompo teo amin'ny sehatry ny milina fanamboarana ireo mpikambana ao amin'ny vondrona SINOVO. Taorian'ny fandrosoana sy fanavaozana maherin'ny 20 taona, nanangana fiaraha-miasa maharitra amin'ny paikady maharitra miaraka amin'ireo mpanamboatra fitaovana ambony eto amin'izao tontolo izao sy orinasa mpamokatra fitaovana malaza eto Shina ny orinasa ary nahazo loka maro tamin'ny tetikasan'ny injenieran'ny injeniera sy ny tetikasa fanondranana fitaovana ho an'ny taona maro.
Tamin'ny 2008, ny orinasa dia nanao fampidirana stratejika ary nanangana orinasa TEG FAR EAST any Singapore hanamafisana ny fampandrosoana ny tsena Azia atsimo atsinanana.
Tamin'ny 2010, ny orinasa dia nanambola tamin'ny sehatry ny famokarana sy ny famokarana Hebei Xianghe faritra fampisehoana indostrialy mipoitra, manarona faritra 67 mu, miaraka amin'ny fampiasam-bola mitentina 120 tapitrisa yuan, mirotsaka amin'ny R&D ary ny famokarana milina injenieran'ny antontam-bato, fananganana , fitrandrahana fantsakana rano ary fitaovana fitadiavana ara-jeolojika. Ny orinasa dia miorina ao amin'ny Xianghe Industrial Park, 100 km miala ny seranan'i Tianjin, mampihena ny vidin'ny fitaterana.
Beijing Sinovo International & Sinovo Heavy Industry Co. Ltd. dia ISO9001: 2015 mpanamboatra mari-pandrefesana sy rigs piling. Hatramin'ny nanombohantsika, dia nanolo-tena hanome fitaovana fitrandrahana avo lenta ho an'ny mpanjifa manerantany izahay. Noho ny ezaka nataontsika nandritra ny taona maro, nanangana toby famokarana izahay izay mirefy 7 800 metatra toradroa ary misy fitaovana 50 mahery. Mba hanomezana fahafaham-po ny fitomboan'ny fitakiana eo amin'ny tsena dia miasa hatrany izahay mba hampitomboana ny fahafahanay mamokatra. Ankehitriny ny famokarana fanao isan-taona ho an'ny rigs drilling dia 1, 000 unit; Rigs fandavahana fantsakana rano dia 250 unit; ary ny rigs fandavahana rotary dia singa 120. Ho fanampin'izany, noho ny asa mafy ataon'ireo injeniera matihaninay dia lohalaharana amin'ny sehatry ny fifehezana hydraulic sy ny rafitra fiara isika, izay manampy amin'ny fitaovan'ny mpitrandraka hifaninanana eo amin'ny tsena. Ny orinasanay dia any Beijing City, renivohitr'i Sina. Eto isika dia afaka miditra amin'ny fitaterana mety, loharanom-pahalalana asa be, ary ny haitao mandroso. Manamora ny famokarana sy ny fandefasana ny vokatray izany ary ahafahanay manome azy ireo amin'ny vidiny ambany.
Amin'ny maha mpanamboatra rig fandavahana lava ao Shina ， ny vondrona SINOVO dia manao bizina amin'ny lazany sy am-bava. Izahay dia manolo-tena hanome serivisy tonga lafatra ho an'ny mpanjifa. Mba hahatonga ny mpanjifa hahatsapa ho azo antoka amin'ny fampiasana ny vokatray, dia manangana rafitra serivisy aorian'ny -sarotra izahay, ary manome fiantohana maharitra iray taona ho an'ny rig fandavahana anay. Mandritra ny vanim-potoana fiantohana dia manome debugging maimaim-poana izahay, serivisy fanofanana sy fikojakojana ny mpandraharaha. Ho fanampin'izany, manolotra kojakoja fanampiny maimaimpoana koa izahay. Satria ny singa fototra ampiasainay dia nohafarana avy amin'ireo orinasa malaza manerantany, ireo mpanjifantsika any ivelany dia afaka mitazona ireto singa ireto mora foana.
Serivisy mialoha ny varotra
1. Ho an'ny vokatra tsirairay, hanome ny mpanjifa fampahalalana momba ny vokatra mifandraika amin'izany izahay sy fampahalalana ara-teknika hahazoana antoka fa azo ampiharina ilay vokatra.
2. Araka ny fifanarahan'ny varotra ataontsika dia handefa ara-potoana ny vokatra vita amin'ny fandavahana izahay.
3. Ny fitaovana rehetra dia tsy maintsy mandalo fanaraha-maso henjana sy fitsapana miverimberina mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa.
4. Ny vokatray dia azo zahana amin'ny antoko fahatelo. Ny vokatra rig rehetra dia hihatsara arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa.
Serivisy ao anaty amidy
1. Hodinihinay akaiky ny satan'ny mpanjifanay. Matetika izahay dia mifandray amin'ireo mpanjifantsika ary mitsidika azy ireo indraindray.
2. Ho tombontsoan'ny mpanjifanay dia nanomana ny entana izahay.
3. Ny fotoana fandefasana anay dia tsy ela, manodidina ny 10 ka hatramin'ny 15 andro. Rehefa mila hatsaraina ny vokatra mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa, dia ho lava kokoa ny fotoana fandefasana.
1. Manome serivisy serivisy serivisy serivisy eo an-toerana mandritra ny iray na roa herinandro izahay ho an'ny mpanjifanay.
2. Ny faritra mitafy ara-dalàna dia soloina maimaim-poana ao anatin'ny vanim-potoana fiantohana.
3. Ho an'ny fahasimbana mihoatra ny faritry ny andraikitsika dia afaka manome torolàlana ara-teknika mifanaraka amin'ny takian'ny mpanjifa izahay, mba hanamboarana na hanoloana izay vaovao.
Manana ekipa mpitarika tena mahay izahay, mandray anjara amin'ny famokarana sy ny varotra milina sy fitaovana fananganana mandritra ny 30 taona mahery. Ekipa mpandraharaha varotra vahiny za-draharaha sy ekipa aorian'ny varotra matihanina.
Ny vondrona Sinovo dia manome lanja lehibe ny fiofanana momba ny mpiasa sy ny fikarohana ary ny fampandrosoana ny teknolojia, manana ekipa fikarohana sy fampandrosoana eo amin'ny sehatry ny haitao matihanina ary nahazo tetik'asa patanty maromaro.
Kilasy fanadinana taratasy fanamarinana
Taratasy fanamarinana Patent (1)
Taratasy fanamarinana Patent (2)
Taratasy fanamarinana Patent (3)
Taratasy fanamarinana Patent (4)
Taratasy fanamarinana Patent (5)
Taratasy fanamarinana Patent (6)
GOST (Taratasy TR）